मिडियामाथि निगरानी गर्न भारतमा २०० सदस्यीय सरकारी टिम क्रियाशील | Ratopati
मिडियामाथि निगरानी गर्न भारतमा २०० सदस्यीय सरकारी टिम क्रियाशील
personएजेन्सी exploreभारत access_timeसाउन २५, २०७५ chat_bubble_outline0
नयाँ दिल्ली । नयाँ दिल्लीमा सीबीआई हेडक्वार्टरको ठीक छेउमा छ, सूचना भवन । यही भवनको १० औं तल्लाबाट भारतभरको समाचार च्यानलमाथि सरकारी निगरानी गरिन्छ ।
बितेको चार वर्षमा पहिलो पटक निगरानीकर्ताहरुको मोबाइल गेटमै खोसियो । र, पहिलो पटक नै निगरानीकर्ताहरुका सुपरभाइजर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका अतिरिक्त महासचिवले ‘मास्टरस्ट्रोक’को निगरानीको जानकारी बाहिर गए जस्तो सूचना भावी दिनमा बाहिर नजाओस् भनेर चेतावनी दिए ।
त्यसपछि निगरानीकर्ताहरुले सत्तानुकुल मिडियाहरुको ग्रेडिङ गर्छन् । सबैभन्दा बढी सरकारको भजन गाउनेहरुलाई आश्वस्त वाला विधामा राखिन्छ ।
जुन च्यानल बीचको श्रेणीमा आउँछन्, अर्थात प्रधानमन्त्रीको अनुहार कम देखाउँछन्, तीनलाई निगरानी समूहबाट कसैले फोन गर्छ । मित्रवत भाकामा तपाईंले थप ‘प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखाउन आवश्यक रहेको’ चेतावनी दिइन्छ ।
त्यसबेला हुने संवाद पनि कम रोचक हुन्न । पछिल्लो हप्ता नोएडाबाट चल्ने उत्तर प्रदेश केन्द्रित एक च्यानलका सम्पादकलाई फोन आयो । गफ पुरानो परिचय आदानप्रदानबाट मिडियाबारे मोडियो । त्यसपछि मित्रवत भाकामा सावधान गराइयो...
तपाईको च्यानलले कम देखाउँछ ...
कसलाई कम देखाउँछ...
तपाईलाई जे ठीक लागेको गर्नुस् ...
यो सुझाव हो कि चेतावनी ? सोच्नुस् त अब यसरी च्यानलहरुबीचमा को धेरै प्रधानमन्त्री देखाउने भनेर होड लाग्छ होला ।
एक चरणपछि निगरानीकर्ताको बोली मित्रवत रहन्न । सुझावको हिसाबमा आउँछ । यो बेला फोन सम्वाद सूचना भवनबाट बाहिर गएर सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका बिजेपी कार्यालयसम्म पुग्छ ।
यस पछिको तरिकामा कुरा मिडिया मालिकहरुसँग हुन्छ । सामान्य हिसाबमा अब मालिक पनि आफैलाई सम्पादक मान्न लागेका छन् । यस्तोमा व्यावसायिक सम्पादकको हैसियत पनि मालिक/सम्पादकहरुको अघि सामान्यतया प्रशिक्षकवाला भइदिन्छ ।
पद–पैसा–नामलाई यथावत राख्नको लागि व्यावसायिक सम्पादक पनि यदाकदा बदलिन्छन् । यो अवस्थाबीच जब निगरानीकर्ताले तयार रहेको रिपोर्टको फाइल कुनै मालिक/सम्पादकसम्म पुग्छ तब स्पष्ट रुपमा दुई प्रतिक्रिया देखिन्छ ।
पहिलो विचार तिनमा आफ्नो च्यानल बलियो भएरै सरकारले निगरानी लिएको होला भन्ने पर्छ ? दोस्रो यति मोटो फाइलमा केही त सत्य होला भन्ने पर्छ । त्यसपछि सम्पादकको क्लास लिइन्छ र च्यानल नतमस्तक हुन्छ ।
तथापि पहिलो प्रतिक्रियाको पनि दुई अनुहार छन् । एक मालिक÷सम्पादकलाई लाग्छ कि फाइलको प्रयोग गरेर लेनदेन गर्न सकिन्छ र दोस्रो यदी च्यानलमा देखाइएको तथ्य सही छ भने फेरी सरकारी फाइलसँग अतिरिक्त डराउनु पर्ने केही छैन ।
यस्तोमा पत्रकारिताको साखमा प्रश्न नउठोस् भन्ने सोच पनि जाग्छ तर यो दायरामा कति आउँछन्, त्यो पनि प्रश्न हो । यस्ता मालिक/सम्पादक पनि छन् यसलाई अस्वीकार पनि गर्न सक्दैन ।
सन् २००९ मा अम्मिका सोनी सूचना तथा प्रसारण मन्त्री भएपछि निगरानीकर्ताहरुलाई संवेदनशील मुद्दाहरुमा नजर राख्न लगाइयो ।
सन् २०१४ मा सत्ता बदलिनासाथ निगरानी गर्नेको दृष्टिकोणनै बदलियो ।
जहाँ पहिले १५ देखि २० मानिसहरु काम गर्थे, त्यहाँ निगरानीकर्ताको सङ्ख्या २०० सम्म पु¥याइयो । ब्रोडकास्ट इन्जिनियरिङ करपोरेशन इण्डिया लिमिटेडमार्फत भर्तीहरु शुरु गरियो ।